Khuphela i-WhatsApp yethebhulethi ye-Android, ungayenza njani? | I-Androidsis
Xa befika ekhaya, bambalwa abashiya iselfowuni baze bajike kwithebhulethi. Nangona kunjalo, sijamelene nesikhubekiso, I-WhatsApp yethebhulethi Ayithandwa njengoko besicinga, kwaye nangona uninzi lwezinto ezizezinye eziye zavela ngokuhamba kwexesha, kuya kufuneka unolwazi oluthile oluncinci ukuze ukwazi ukuba ne-WhatsApp ye-Android tablet. Ezona zithandwa kakhulu ziipilisi zeKorea Samsung, yiyo loo nto khuphela i-WhatsApp ye-Samsung tablet Ayifanelanga ukuba nzima kakhulu, sifuna ukukubonisa ukuba ungayenza kanjani.
Iitafile ziye zaduma ngokuhamba kwexesha, ukusukela ukufika kwazo indlela esebenzisana nezikrini itshintshile. Nangona kunjalo, bakwiiyure eziphantsi, ukwandiswa ngokuthe ngcembe kwezikrini zeefowuni zefowuni kuye kwenza ukuba uninzi lwabasebenzisi luye lwenza ingqiqo yamacwecwe. Nangona kunjalo, i-niche yabasebenzisi esenayo kwaye iqhubeka nokuba nayo njengezinto zokuzonwabisa kunye nokusebenzisa umxholo ekhaya, inkulu kakhulu. Mhlawumbi yiyo loo nto kungekho mvelisi wee-smartphones ezisemgangathweni ezingenayo ipilisi enye okanye ezingaphezulu phakathi kwezikhundla zayo, ke ngoko siza kukubonisa uyifaka njani i-WhatsApp kwithebhulethi ye-Android.
1 Khuphela i-WhatsApp yeThebhulethi mahala
2 Uyifaka njani i-WhatsApp kwithebhulethi yeWifi ngaphandle kweSIM
3 Ungayifumana njani i-WhatsApp kwiselfowuni kunye nethebhulethi yakho ngaxeshanye
Khuphela i-WhatsApp yeThebhulethi mahala
I-WhatsApp ayinakuphikiswa, ngenxa yoko sinokuyenza ngokulula nge-WhatsApp. Kwimeko ye-Android, inkqubo yayo evulekileyo inezibonelelo ezininzi, ke kulula ngokulula yiya kwiwebhusayithi esemthethweni yeWhatsApp kwaye ukhuphele iapap I-WhatsApp ukuyifaka kwithebhulethi yethu. Nangona izigqibo zingenakulunga, kuxhomekeke kubungakanani bethebhulethi esiyisebenzisayo, imisebenzi esisiseko iya kugcinwa. Uninzi lwamacwecwe aluyi kusivumela ukuba sikhuphele i-WhatsApp kwiVenkile yeGoogle Play, ke, ngeli xesha eyona ndlela ilungileyo yiwebhusayithi esemthethweni yeWhatsApp, ukongeza, ke siyaqinisekisa ukuba sikhuphela ingxelo yokugqibela WhatsApp Messenger kwithebhulethi.
Xa sele ifakiwe I-WhatsApp kwi-Android, inkqubo iyafana ncam nayo nayiphi na enye ifowuni, inombolo yefowuni, faka ikhowudi yokuvula, kwaye sinokuqala ukuncokola nabafowunelwa bethu.
Ngexesha le hlaziya i-whatsapp Kwiipilisi, inkqubo emayilandelwe iyafana nesinye isicelo, nangona unolwazi oluthe kratya kwikhonkco esisandula ukukushiya.
Uyifaka njani i-WhatsApp kwithebhulethi yeWifi ngaphandle kweSIM
Nantsi ingxaki ivela ngabasebenzisi Abasebenzisi iSIM khadi kwiipilisi zaboOko kukuthi, abanalo elinye ikhadi okanye enye inombolo abanokuvula ngayo iakhawunti kaWhatsApp, ke sinengxaki enkulu. Ewe, i-WhatsApp ayisosicelo seplatform ezininzi, oko kukuthi, sinokuba nenombolo enye kuphela kwisixhobo esinye. Olunye ukhetho kukuthenga Ithebhulethi yamaTshayina nge-4G kwaye uyinike inani elahlukileyo.
Olunye uhlobo lokuqala kukukhuphela naziphi na kwezi zicelo kwiVenkile yeGoogle Play, zizicelo eziyinyani Clone WhatsApp iklayenti yeWebhu, Kwaye baya kusivumela ukuba sisebenzise i-WhatsApp kwithebhulethi yethu, ngendlela efanayo neefowuni zethu, kunye nabo sinxibelelana nabo kunye nenombolo yethu yefowuni. Into emnandi ngale ndlela kukuba yeyona ikhawulezayo kwaye kulula ukuyisebenzisa, kufuneka ukhuphele usetyenziso kule khonkco kwaye uskene ikhowudi yeBidi kwicandelo lezicwangciso ze-WhatsApp kwi-smartphone yethu, kufuneka ucofe ku "WhatsApp Web" kwi i-smartphone yokuqalisa ukuskena.
Enye indlela yile Sebenzisa ngqo iWebhu yeWhatsApp, singena ku-www.web.whatsapp.com kwaye silayishe uhlobo lwedesktop yesikhangeli sethu esiqhelekileyo se-Android. Ngelo xesha, sijonga ikhowudi yeBidi kwaye iya kuqala ukusebenza njengoko isenza kwiPC.
Ungayifumana njani i-WhatsApp kwiselfowuni kunye nethebhulethi yakho ngaxeshanye
Ukuba ungomnye wabo babuya ekhaya kwaye ulibale ngokupheleleyo malunga nefowuni yakho kwaye ukhetha ithebhulethi ukujonga iinethiwekhi zentlalo, ii-imeyile, ukonwabele uthotho lweNetflix ... xa i-smartphone yakho ikhala kuba ufumene i-WhatsApp, akufuneki uphakame ubaleke ukuze ubone ukuba ngubani onayo unesibindi ndikuhluphe ngeeyure zakho zokuphumla.
Ngelixa bevela kuWhatsApp basacinga malunga nokuba bangasungula na isixhobo esisebenzisa izixhobo ezininzi, esivumela ukufikelela kwiakhawunti yeWhatsApp kwisikhangeli okanye ithebhulethi ngaphandle kokuba i-smartphone ivulwe, ekuphela kwesisombululo esinaso ukuze sikwazi jonga i-WhatsApp kwithebhulethi yethu kungenxa yesikhangeli.
I-WhatsApp isivumela ukuba singene kuWhatsApp wethu kwikhompyuter ngokusebenzisa isikhangeli, okoko nje i-smartphone enenombolo ehambelana nayo ivuliweKuba isebenza ngokungathi sisipili, yonke into efunyenweyo kwaye iphendulwe kwi-smartphone ibonakalisiwe kuhlobo lwewebhu kwaye kungenjalo.
ukuba une-WhatsApp kwiselfowuni kunye nethebhulethi yakho kufuneka senze la manyathelo alandelayo:
Okokuqala, kufuneka sivule isikhangeli esihlala sisebenzisa kwithebhulethi yethu kunye nokufikelela kwiwebhu.whatsapp.com. Kuyacetyiswa ukuba sisebenzise i-Firefox, i-Chrome okanye i-Samsung Internet Browser ukuba asifuni kubandezeleka ziingxaki zokusebenza.
Kwimeko apho inguqulelo yewebhu enekhowudi ye-QR ingaboniswanga, singena kukhetho lwesikhangeli kwaye sijonge ukhetho Cela indawo yedesktop.
Emva koko, sithatha i-smartphone kunye nokufikelela Imenyu> WhatsApp Web kunye nekhamera iya kwenziwa isebenze. Apha ngezantsi nje kwekhowudi yeQR sifumana ukhetho oluphawulwe ngokungagqibekanga Ndigcine ndingene. Awunyanzelekanga ukuba ukhangele ibhokisi ukuba awufuni ukuya kwinkqubo ngalo lonke ixesha ufuna ukufikelela kuWhatsApp kwithebhulethi.
Okokugqibela, kufuneka sikhombe ikhamera kwiscreen sethebhulethi yethu ukuze yamkela ikhowudi yeQR Zonke izingxoxo zibonisiwe kwaye zibonisiwe kwisikhangeli ngokungathi yinguqulelo yewebhu yeekhompyuter.
Nje ukuba siqwalasele i-WhatsApp kwithebhulethi ukuze sikwazi ukufumana imiyalezo ye-WhatsApp evela kwi-smartphone yethu kwithebhulethi, kufanelekile yenza indlela emfutshane yedesktop kwithebhulethi yethu, ukusoloko unayo kwaye akufuneki ukhangele kwidesktop okanye kwidrowa yesicelo sethebhulethi yethu.
Ukwenza indlela emfutshane kwiwebhu esiyisebenzisayo ukufikelela kuWhatsApp kwithebhulethi yethu, kufuneka ucofe kwimenyu yokukhetha isikhangeli kwaye ujonge ukhetho Yongeza indlela emfutshane kwiphepha. Ngelo xesha, ukufikelela ngokuthe ngqo kuya kongezwa kwideskithophu yethebhulethi yethu, ukufikelela ngokuthe ngqo okuya kuvula isiphequluli esingagqibekanga ukufikelela kwiakhawunti ye-WhatsApp ngokungathi sisicelo.
Le nkqubo akufuneki uyenze ngalo lonke ixesha ukuba sifuna ukufikelela kuhlobo lwethu lweWhatsApp kwithebhulethi, kuphela okokuqala. Inye into ekufuneka siyithathele ingqalelo ngokubhekisele kulo msebenzi kukuba ukuba ngoseto lwesicelo, siyavala zonke iiseshoni zeWhatsApp, kuya kufuneka siyenze le nkqubo kwakhona, kwaye i-WhatsApp iyakushenxisa imvume ebiyinike isiphequluli vumela ukufikelela kwesinye isixhobo ngaphandle kwe-smartphone, ke kuya kufuneka siyenze kwakhona inkqubo.